सरकारले अकस्मात सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य - Lekhapadhee
सरकारले अकस्मात सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य
लेखापढी १८ असार २०७७, बिहीबार २१:३५
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा संसद्को बर्खे अधिवेशन बिहीवार साँझ ५ बजेदेखि अन्त्य गरेकी छन्।
बिहीबार बिहान आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरिन् र यससम्बन्धी पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई पठायो।
संसद्‌को अधिवेशन बैशाख २६ गतेदेखि सुरु भएको थियो। अधिवेशन शुरु हुनुअघि मन्त्री, सांसद र संसद्‌का कर्मचारी सबैको कोरोनाभाइरस परीक्षण गरिएको थियो।
चालु अधिवेशनमा संविधान संशोधन विधेयक अनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पारित भएका छन्।
निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयक अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको छ।
नेकपाभित्र विवादित बनेको एउटा अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी पनि संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको थियो।
दुई अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी समय राख्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा नयाँ संसद् अधिवेशन सुरु हुन सक्नेछ।
प्रम ओलीले सबैलाई चक्मा दिंदै संसद कोमामा पठाएपछि“अब के हुन्छ?”भन्ने प्रश्न सोधेको सुन्दा एउटा मूर्ख र ज्योतिषीको कथा सम्झना भैरहेछ! हातमा मुंग्रो लिएको मूर्खले ज्योतिषीलाई भनेछ-लौ भन,मैले तिम्रो टाउकोमा हान्छु कि खुट्टामा? क्या फसाद-टाउको भनौं खुट्टामा हान्छ,खुट्टा भनौं टाउकोमा!
संघीय संसदको चालु अधिवेशन अप्रत्यासित रुपमा अन्त्य!
विनासकाले विपरित वुद्धि!
संसदमा थुप्रै विधेयकहरू कार्यसूचीमा र प्रक्रियामा छन,कोभिड-१९ लगायत विभिन्न विषयमा प्रस्ताव दर्ता छन।
पार्टीभित्रको किचलोको अचानोमा संसद!
संसदलाई छलेर अव कुनै पनि अध्यादेश ल्याउने दुस्प्रयास नहोस्।
— Gagan Thapa (@thapagk) July 2, 2020
संसद्लाई कुनै थाहा जानकारी नदिई अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको बिरूद्धमा छ। संसद्लाई सरकारले यसरी आफू खुशी उपयोग गर्दै जाने हो भने संसदीय ब्यवस्थाको अवधारणा नै खण्डित हुन जान्छ। संवैधानिक लोकतन्त्रमा सरकार संसद् र संविधान दुवैको अधीनमा बस्नु पर्छ।
— Bhimarjun Acharya (@BhimarjunPhD) July 2, 2020